Andao Hisioka (Hibitsika) Amin’ny Tenin-drenintsika Amin’ny 21 Febroary Izao · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Febroary 2014 1:03 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Français, اردو, বাংলা, polski, عربي, Italiano, English
Nahita ny firongatr'ireo fiarahamonina manerantany mibilaogy, misioka sy mizara hafatra amin'ny tenin-drazany manokana isika tao anatin'izay roa taona izay. Maro tamin'ireo fisantaran'andraikitra tao amin'ny Rising Voices no nampahafantarinay izay fomba hanasongadinana ny asa mahataona ataon'ny sasany mampiasa ny fampitam-baovaon'olo-tsotra ho fameloman'aina indray ny fitenin'izy ireo.
Ny fahitana izany fahasamihafana tsy mitsaha-mitombo amin'ny votoaty antserasera izany dia mety hahafahan'ny olona mahita ny kolontsainy sy ny fiteniny amin'ny alalan'ny resadresaka antserasera sy ao amin'ny sehatra nomerika izay efa fampiasan'izy ireo matetika. Raha maro ny tanora mifandray amin'ny hafa amin'ny alalan'ny tenin-drazany, dia mitondra anjara biriky lehibe amin'ny ho an'ny taranak'ireo mpiteny ireo teny an-dalam-pahaverezana na teny indizeny (teratany) ny fandraisana anjara amin'izany.
Ny 21 febroary no fanamarihana ny Andro Iraisam-pirenena hoan'ny Tenin-dreny (IMLD), fotoana iray hahafahana mankasitraka sy mandrisika ireo izay mampiasa ny fampitam-baovao nomerika antserasera mba hanome hery vao ny tenin-drazany.
Mandraisa anjara miaraka amin'ny Rising Voices sy ny namantsika ao amin'ny Living Tongues Institute (Ivon-toerana Mpamelona Tenin-drazana), Endangered Languages Project (ny Tetikasa momba ny teny an-dalampahaverezana) ary ny Indigenous Tweets (Siokan'ny Teratany) mba hanamarihana ny IMLD amin'ny alalan'ny fanentanana Twitter hampisongadinana ireo izay efa nandefa sioka (bitsika), ary handrisihana olona maro mba hisioka amin'ny tenin-dreniny.
Toy izao ny fomba hahafahanao mandray anjara:
1.) Amin'ny Zoma 21 Febroary, mandefasa sioka amin'ny tenin-dreninao momba ny antony maha-zava-dehibe ny fampiasana ny tenin-drazanao ao amin'ny fampitam-baovaon'olo-tsotra.
2.) Mety te-hanaraka izany sioka izany miaraka amin'ny dikanteny ihany koa ianao mba hahafahan'ny olona maro kokoa afa-mamaky ny hafatra.
3.) Zava-dehibe: ampio ireto diezy Twitter manaraka ireto ny siokanao:
#imld14 (Andro Iraisam-pirenena Hoan'ny Tenin-dreny 2014)
#(ny anaran'ny teny izay ampiasanao), ohatra #cherokee #bambara #xhosa #malagasy
4.) Araho ny diezy Twitter #imld14 raha hijery ireo hafatra avy amin'izao tontolo izao ianao ary ampitao ny sioka (retweet) mba hanamafisana ny hafatr'izy ireo. Afaka manaraka ny diezy Twitter amin'ny teninao ihany koa ianao mba hifandray amin'ny olona izay mety mbola tsy fantatrao.
5.) Ampio ny hafa hampiasa Twitter ka ampio izy ireo hisoratra anarana ato mba ahafahany manomboka mandefa sioka (bitsika).
Sioka marobe avy amin'izany no hampahafantarinay mandritra ny tontolo andro ao amin'ny @risingvoices. Miangavy mba handraisana anjara miaraka aminay!
Azia Atsinanana 17 ora izay